Wararka - Waxyaabaha Saameeya Filimada Iskujira ee Daaweynta & Soojeedinta Hagaajinta
Waxyaabaha Saameeya Filimada Isku -Darka Daawaynta & Soo -jeedinta Hagaajinta
Si loo gaaro saamayn daaweyn habboon, dhowr arrimood ayaa loo baahan yahay in la tixgeliyo, oo ay ka mid yihiin:
1. Foomka qolka daaweynta iyo xaaladda ku habboon: xawaaraha iyo xaddiga dabaysha kulul ee ka timaadda qalabka kululaynta iyo tunnel -ka; dhulka iyo laba ama dhowr dhinac qolka daaweynta ayaa leh dabayl kulul oo ku filan oo isku mid ah; farqi yar oo u dhexeeya heerkulka dhabta ah iyo kan la dejiyay, iyo ilaalinta kulaylka iyo dheecaanka qashinka ayaa buuxiya codsiyada; duubista filimku way fududahay in la dhaqaaqo oo la qaado.
2. Alaabtu waxay buuxisaa codsiyada farsamo.
3. Hawlaha, qiimaha korona, iska caabinta kulaylka, iwm ee filimada dahaarka.
4. Koollo -dhejiyeyaal: koollo dareere ah, dhejis aan milmi lahayn, hal ama laba qaybood oo ah dhejis saldhigga biyaha ah, dhejis dhalaalaya oo kulul, iwm.
Warqadani waxay inta badan diiradda saartaa filimada dahaarka iyo dhejiska.
1. Filimaanta Lamination
Jidhka, u adkaysiga kulaylka iyo waxqabadka carqaladaynta filimka PE, oo si weyn loo isticmaalo, ayaa ka fiicnaan doona, marka cufnaanta PE ay kor u kacdo. Filimaanta PE oo leh cufnaan isku mid ah laakiin hababka wax soo saarka ee kala duwan waxay leeyihiin bandhigyo kala duwan.
CPE si dhaqso ah ayaa loo qaboojin karaa, iyadoo leh hoos -u -dhac yar, hufnaan sare iyo murugo hooseysa. Laakiin habaynta molecular -ku waa mid aan joogto ahayn, taas oo ka dhigaysa waxqabad caqabad xun, taas oo ah gudbinta sare. Oo waxay la mid tahay LDPE. Sidaa darteed, heerkulka daawaynta waa inuusan noqon mid aad u sarreeya marka la isticmaalayo filimada PE. Marka iska -caabbinta kulaylka ee PE ay hagaagto, heerkulka wax -ka -qabadku wuu sarrayn karaa.
2.1 Ethyl Koollo Ku Salaysan
Marka loo eego bandhigyada filimada dahaarka iyo dhejiska, xaaladaha daawaynta waxaa loo qaybin karaa heerar kala duwan:
1. Heerkulka 35℃, waqtiga 24-48h
2. Heerkulka 35-40℃, waqtiga 24-48h
3. Heerkulka 42-45℃, waqtiga 48-72h
4. Heerkulka 45-55℃, waqtiga 48-96h
5. Gaarka ah, heerkulku ka badan yahay 100℃, waqtiga marka loo eego taageerada farsamo.
Badeecadaha caadiga ah, iyada oo la tixgelinayo cufnaanta, dhumucda, ka-hortagga, waxqabadka iska-caabbinta kuleylka ee filimada iyo sidoo kale xajmiga bacaha, heerkulka daawaynta waa inuusan noqon mid aad u sarreeya. Caadi ahaan, 42-45℃ ama ka hooseeya ayaa ku filan, waqtiga 48-72 saacadood.
Filimmada dib -u -dejinta, oo u baahan waxqabad sare iyo iska -caabbinta kuleylka wanaagsan ayaa ku habboon daaweynta heerkulka sare, sida in ka badan 50℃. Filimada gudaha, sida PE ama kuleylka ku xiridda CPP, waxay ku habboon yihiin 42-45℃, waqtiga daawaynta ayaa laga yaabaa inay dheeraato
Alaabta karkarinta ama dib -u -soo -celinta, oo u baahan wax -qabad sare iyo iska -caabbinta kulaylka oo sarreeya, waa inay waafaqsan tahay xaaladaha dawaynta ee ay warshad dhejisku bixiso.
Waqtiga daaweyntu waa inuu waafaqsan yahay heerka dhammaystirka falcelinta, isku -dheelitirka khilaafaadka iyo wax -qabadka shaabadaynta kulaylka.
Badeecadaha gaarka ahi waxay u baahnaan karaan heer kulka sare ee dawaynta.
2.2 Koollo aan Xal lahayn
Haddii waxqabadka shaabaddu ay buuxiso shuruudihii, alaabooyinka dahaarka leh ee aan dhammaadka lahayn, kuwaas oo aflaanta gudaha ahi leeyihiin cufnaan hooseysa, dhejisyadu waxay leeyihiin monomers badan oo lacag la'aan ah, taasoo adkeyneysa in la xiro. Sidaa darteed, daaweynta heerkulka hooseeya ayaa lagula talinayaa, 38-40℃.
Haddii heerka dhammaystirka falcelintu uu buuxiyo shuruudda, waa in la tixgeliyaa waqti dheer oo wax lagu daweeyo.
Haddii filimaanta daboolidda kuleylku leeyihiin cufnaan sare, heerkulka daawaynta waa inuu ahaado 40-45℃. Haddii heerka dhammaystirka falcelinta iyo waxqabadka ku -xidhidda kulaylku u baahan yihiin hagaajin, wakhtiga daaweyntu waa inuu dheeraadaa.
Imtixaanka adag waa lama huraan intaan la soo saarin wax -soo -saarka, si loo hubiyo tayada.
Waxaa intaa dheer, qoyaan waa in la tixgeliyaa. Gaar ahaan jiilaalka qalalan, qoyaan habboon ayaa dardar gelin karta heerka falcelinta.
2.3 Koollada Biyaha Ku Salaysan
Marka la dejinayo VMCPP, mashiinka dahaadhu waa inuu ahaadaa mid qalalan oo ku filan, ama lakabka aluminized waa la oksidi doonaa. Inta lagu jiro daaweynta, heerkulku waa inuusan noqon mid aad u sarreeya ama aad u hooseeya. Heerkulka sare wuxuu u horseedi doonaa isku -dheelitirka isku dhaca ee sarreeya.
2.4 Koollada Dhalaalo Kulul
Caadi ahaan dooro daaweyn dabiici ah, laakiin waxqabadka adhesion ka dib dhalaalid waa in la ogaadaa.
3. Si adag u Xakamee Heerkulka Daaweynta
Sida laga soo xigtay cilmibaarisyada, dhinaca heerka falcelinta, ma jirto ku dhawaad ​​falcelin ka yar 30℃. In ka badan 30℃, 10 kasta℃ sare, heerka falcelinta ayaa hagaaga ilaa 4 jeer. Laakiin waasax ma aha in la hagaajiyo heerkulka si loo dardargeliyo heerka falcelinta indho la'aan, dhowr arrimood waa in la ogaadaa：heerka falcelinta dhabta ah, isbarbaryaaca kala -goynta iyo xoogga quwad kulaylka.
Si loo gaaro natiijada daawaynta ugu fiican, heerkulka daawaynta waa in loo qaybiyaa dhinacyo kala duwan, sida ku cad filimada iyo qaab dhismeedka.
Waqtigan xaadirka ah, dhibaatooyinka guud waa sida soo socota:
Mid, heerkulka daawaynta aad buu u hooseeyaa, taasoo ka dhigaysa heerka falcelinta oo hooseeya, badeecaduna waxay leedahay dhibaatooyin ka dib marka la shaabadeeyo ama la kariyo.
Laba, heerkulka daawaynta aad buu u sarreeyaa oo filimka shaabadaynta kulul wuxuu leeyahay cufnaan hooseysa. Badeecadu waxay leedahay wax-qabad shaabad kulul oo kulul, isku-dheelitirka isku-buuqa sare iyo saamaynta ka-hortagga xannibaadda xun.
Si loo gaaro saamaynta daaweynta ugu fiican, heerkulka daaweynta iyo waqtiga waa in lagu go'aamiyaa heerkulka deegaanka iyo huurka, waxqabadka filimka iyo wax qabadka dhejiska.
Waqtiga dhejinta: Apr-22-2021